Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Ukubuyisa kade kwi-Post-COVID yeNdawo yokuHamba koMoya
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngokuqhambuka kwe-COVID-19 kunyanzela ilizwe elidibeneyo ukuba lisebenze kwizicwangciso zokunciphisa iindleko, inkcitho yokuhamba kulindeleke ukuba ifumane ulawulo oluphezulu lokufumana amathuba amatsha okonga iindleko.
Ngenxa yokuqhambuka kwe-COVID-19, iinkampani zikhangela iindlela zokunciphisa iindleko.
Phambi kobhubhane, abahambi bamashishini abamele malunga nesiqingatha sayo yonke ingeniso enkulu yenqwelomoya.
Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kulindeleke ukuba kunciphe ngokusisigxina ngepesenti ye-19.
Ngengeniso ethe yabethwa ngenxa yokuqhambuka kwe-COVID-19, iinkampani zikhangela iindlela zokunciphisa iindleko. Oku kuzise ingqwalaselo kuhambo oluhlangeneyo lomoya. Phambi kobhubhane, abahambi bamashishini abamele malunga nesiqingatha sayo yonke ingeniso enkulu yenqwelomoya, efikelela kwipesenti ezi-1.7 ze-GDP yehlabathi. Nangona kunjalo, ngenxa yengxaki eqhubekayo, ukuhamba ngenqwelomoya kumashishini kulindeleke ukuba kunciphe ngokusisigxina nge-19 yepesenti.
Xa ukuthintelwa kokuhamba kwamiselwa kwihlabathi liphela, amashishini athabathe indawo yeentlanganiso ngokuthe ngqo kunye nezo zinokuthintela ukusasazeka kwesi sifo. Amashishini amaninzi ahlengahlengise iintlanganiso kwaye aqonde ukuba ayizizo zonke iintlanganiso ekufuneka zibekho buqu. Amashishini aye aqaphela ukonga iindleko ezinkulu kwinkcitho yohambo lomoya.
Kwixesha elizayo, ukuhamba ngenqwelomoya kuya kuba yindlela yokucinga kunye nengcinga yokucinga, evumela abasebenzi ukuba babenobomi obulunge ngakumbi kunye nabaqeshi ukuba babe nembuyekezo engcono kutyalo-mali.
Iinkampani zilungiselela iintlanganiso ezibonakalayo kwaye le modeli iye yathandwa ngakumbi kuninzi lwazo. Baye baqonda ukuba iintlanganiso zangaphakathi-ngaphakathi azisoloko zifuneka. Imodeli yomsebenzi wasemva kobhubhane odibanisa ubuso ngobuso kunye nokuseta okunokubangela ukuba amashishini aphumelele ngelixa enciphisa iindleko zokuhamba kwenkampani. Abaqeshwa kufuneka bahambe kuphela xa oko kuyimfuneko. Nanga amanye amanyathelo athathwe ziinkampani ukunciphisa ukuhamba ngenqwelomoya kumashishini kunye nokuqinisa ingeniso:
Ulawulo lweendlekoPhantse lonke ishishini lijamelene nobunzima ngenxa yobhubhane kumanqanaba ahlukeneyo. Kulonto, iinkampani zijonga ngenkuthalo amanyathelo okwenza ingeniso apho kunokwenzeka. Ukuthintela ukuhamba kweshishini kuphezulu kuluhlu lwabo, apho berhoxisa lonke uhambo olungabalulekanga.